» संक्रमितको शव जलाउनका लागि १७ हजार ?
संक्रमितको शव जलाउनका लागि १७ हजार ?
सिङ्घानियाले अस्पतालका दर्जनौँ बेवारिस शवलाई आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा समेत दाहसंस्कार गरेको बताए । उनले अहिले कोरोना महामारीको बेला शव जलाउनेले यहाँका कर्मचारीलाई स्वइच्छाले रु हजार हजार–पन्ध्र सय दिने गरेको बताए । यद्यपि स्थानीय बुद्धिजीवीले अहिले जनकपुरधामभित्रका अस्पतालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको शव व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च राज्यले व्योहोर्नुपर्ने माग गरेका छन् । रासस